ပြန်လည်နာလန်ထူ -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin များအတွက်ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ
Testosterone Cypionate (Test cyp) အမှုန့်
testosterone Enanthate အမှုန့်
testosterone Sustanon 250 အမှုန့်
testosterone Undecanoate အမှုန့်
testosterone Isocapronate အမှုန့်
ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် PCT ဆေးဝါးများ - နော်ဗadex၊ Clomid၊ Letrozole, Aromasin, Halotestin
/ဘ‌‌လော့ခ်/fluoxymesterone , ဆေး Tamoxifen-citrate/ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက် PCT ဆေးဝါးများ - နော်ဗadex၊ Clomid၊ Letrozole, Aromasin, Halotestin
အပေါ် Posted 11 / 05 / 2017 by ၏ ရေးသားခဲ့သည် fluoxymesterone, ဆေး Tamoxifen-citrate.
ထို့အပြင်အခြား MuscleTalk အပေါ်လည်းမရှိပုံကိုကာယဗလများအတွက်သင့်လျော်သော steroids ရွေးချယ်ဖို့, မေးမြန်းဖို့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကာယဗလဧရိယာ၌, ကြောင်း Clomid, Nolvadex နှင့် Letrozole, Aromasin, Halotestin, Anastrozole ကဲ့သို့ post ကိုသံသရာကုထုံး (ရာခိုင်နှုန်း) မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် correctly.Today ကျနော်တို့ဘယ်လိုသင့်လျော်ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများရွေးချယ်ဖို့သင်ပေးဖို့ဂုဏ်နဖြစ်ကြသည်။
စက်ဘီးစီးပြီးနောက်ကုထုံး (PCT) သည်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သောဆေးများကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အက်စထရိုဂျင်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ဟော်မုန်းအဆင့်များကိုပြန်လည်ထိန်းညှိရန်နှင့်သင့်အားပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်အတွက်တိကျသောဒြပ်ပေါင်းများ၊ prohormones / steroids သံသရာတစ်ခုပြီးတဲ့အခါပုံမှန်သွားပါလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်အန်ဒရိုဂျင်များသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ပိုင် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုဟန့်တားစေသည်။ ကာယပညာရှင်တစ် ဦး သည်သဘာဝတစ်ခု၊ testosterone ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်မှုသုညဖြစ်ပြီးသွေးထဲမှာယူ steroids ၏အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့စေကြသည်။ ဤသည် catabolic များ၏အချိုးအရွက်: တို့၏အသွေးမြင့်မားတဲ့အတွက်ဟိုဟော်မုန်းဤအရပ်မှခန္ဓာကိုယ် catabolism တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်, တစ်ဦးရလဒ်အတိုင်း, သံသရာအပေါ်ရရှိခဲ့သောကြွက်သားတစ်သျှူးများ၏အများကြီးယခု lost.Thus ဖြစ်မယ့်, ရာခိုင်နှုန်းတဲ့အခါလိုအပ်ဖြစ်လာ ကာယဗလ.PTT ဆေးခြောက်မျိုးပါ။ ၎င်းတို့သည်၎င်းနှင့်သူတို့၏ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို PCT တွင်မိတ်ဆက်တော့မည်။
Nolvadex ကိုလည်းဆေး Tamoxifen citrate အဖြစ်လူသိများ, nolvadex ၏အဓိကဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု, ကာယဗလအတွက်ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ကြိုတင်နဲ့ post သွေးဆုံး women.Used အတွက်နှစ်ဦးစလုံးစောစောပိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာကုသဖြစ်ပါသည်
Nolvadex သည် LH နှင့်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သံသရာမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်ကူညီပေးပါမည်၊ ၎င်းသည်၎င်းသည်သံသရာလွန်ကုထုံး (PCT) အတွက်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Clomiphene, tamoxifen ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် PCT regiments အများစုအတွက်အကောင်းဆုံးသောပြန်လည်နာလန်ထူမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည် anabolic steroids ကို run သောအခါ၊ pituitary က၎င်းသည်ဟော်မုန်းများများလာခြင်းကိုသတိပြုမိသဖြင့်အိပ်ပျော်သွားသည်။ နှင့်ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် testosterone ဟော်မုန်းထုတ်ပေး; ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းရဲ့သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဟာပိတ်သွားတယ်။
Nolvadex ဘယ်လိုလည်ပတ်သလဲ။ ဒါဟာ gonadotropins ပိုပြီးထုတ်လွှတ်ဖို့ hypophysis ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်။ အက်စထရိုဂျင်ကို pituitary ထဲမ ၀ င်အောင်တားဆီးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် LH ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကြိုးကိုင်ခြယ်သသည်။ ။ ရလဒ်အနေဖြင့် Nolvadex ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်တိုင်အောင်ကြွက်သားများအမြန်ဆုံးရှုံးမှုကိုလျော့နည်းစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ဆေးသောက် citrate ကိုခေါ် Clomid, ဆေး Tamoxifen (nolvadex) အဖြစ်ဆင်တူတဲ့ SERM (ရွေးချယ်အီစရိုဂျင် receptor modulator တွေကို) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာမထှနျးနေသောသူတို့အဘို့အသုံးဝင်သည်အရာမျိုးဥထွက်သော induction များအတွက်ကျယ်ပြန့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုံးဖြစ်ပါတယ်။
nolvadex ကဲ့သို့ပင် Clomid သည် gonadotropins များထုတ်လွှတ်ရန် hypophysis ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းဖြင့်နှိုးဆွပေးသည်။ Gonadotropins သည် pituitary gland ၏ gonadotrope ဆဲလ်များမှထုတ်ပေးသော follolic stimulating hormone (FSH) နှင့် luteinizing hormone (LH) တို့ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာထုတ်လွှတ်ပေးသောပရိုတိန်းဟော်မုန်းများဖြစ်သည်။ gonadotropins တိုးများလာသောအခါ LH မြင့်တက်လာခြင်းသည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်အထိမြင့်မားသော testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုမြင့်တက်စေပြီးစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုမြင့်တက်စေသည်။ ထို့ကြောင့် clomid သည်သံသရာလွန်ကုထုံးတွင်လူကြိုက်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (PCT) ခန္ဓာဗေဒ steroids သံသရာသောသူတို့သည်။
Letrozole, အမှတ်တံဆိပ်အမည်, သွေးဆုံးပြီးနောက်အမျိုးသမီး (ထိုကဲ့သို့သောဟော်မုန်း-receptor-positive ရင်သားကင်ဆာကဲ့သို့) ရင်သားကင်ဆာအချို့အမျိုးအစားများကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေး Femara.This ။ ဒါ့အပြင်ရာခိုင်နှုန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအတှကျအသုံးပွု, Letrozole မူးယစ်ဆေးခန္ဓာကိုယ်အီစရိုဂျင်ပမာဏကိုလောကတွင်ဆရာမများ၏တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ကျစေရေးကူညီပေးသည်လျော့နည်းစေပါသည်။
Letrozole (တတိယမျိုးဆက်) သည် Steroidal မဟုတ်သောတတိယမျိုးဆက် Aromatse inhibitor ဖြစ်ပြီး Arimadex ကဲ့သို့ androgenic သက်ရောက်မှုများကိုမပေးနိုင်ပါ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံး Type2 Non-sterodial ယှဉ်ပြိုင်မှု aromatase inhibitor ဟုခေါ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့် Arimadex နှင့်၎င်း၏အလွန်ဆင်တူသည် Femara နှင့် Arimadex အကြားအဓိကကွာခြားချက်မှာ Femara သည်ပိုမိုအားကောင်း။ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းနှင့်ဖြစ်သည်။ Letrozole ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ estrogen သည်ရင်သားကင်ဆာတစ်သျှူးများ၏ glandular တစ်ရှူးကိုစတင်စိတ်တိုလာလျှင်အချိန်မီတင်ပြပါက letro သည်ပြissuesနာများကိုရှင်းလင်းလိမ့်မည်။ လက်မှာ, gyno ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ PCT အတွင်းလူတစ် ဦး ၏ libido နှင့် lipids များကိုထိခိုက်စေသည့်အရာအဖြစ်မသုံးပါနှင့်။
ထို့အပြင် Exemestane ကိုခေါ် Aromasin,
၎င်းသည် Aromatase အင်ဇိုင်းကိုအက်စထရိုဂျင်ဖန်တီးရန်တားဆီးသောသတ်သတ် Aromatase inhibitor ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Aromatase Inhibitor ဟုခေါ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြား steroidal AIs များကဲ့သို့သင်၏ lipids များကိုအပျက်သဘောမသက်ရောက်စေသည့် steroidal AI တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသည်းအဆိပ်မဟုတ်သည့်အပြင်အဆိုးရွားဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲကြာရှည်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Aromasin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။ Estrogen လုံးဝကိုမသတ်နိုင်ဘူး၊ ပြီးတော့အဲဒီ receptor နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို deactivate လုပ်တယ်။ အခြေခံအားဖြင့် Nolva သည်အီစထိုဂျင်ကို receptor နှင့်မပေါင်းစေဘဲတားဆီးလိမ့်မည်။ …ထိုအက်စထရိုဂျင်အားလုံးသည်တည်ဆောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ထွက်လာတော့ Gyno ကိုပြန်စပြီးပြန်စနိုင်သည်။ သင် aromasin သံသရာနှင့် pct တစ်လျှောက်လုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။
Fluoxymesterone.Fluoxymesterone အဖြစ်လူသိများ Halotestin နှစ်ပေါင်းများစွာလူ hypogonadism သို့မဟုတ်အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုထားပြီးတစ်ဘုံဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအထီးအပျိုဖော်ဝင်နှောင့်နှေး၏ကုသမှုထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အမျိုးသမီးရင်သား neoplasms ၏ကုသမှုတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် fluoxymesterone ကိုအန်ဒရိုဂျင်အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောကြောင့် Halotestin ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည် androgen receptors နှင့်ပစ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ဒါကြောင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင် receptor agonist ကိုခေါ်မယ့်, အန်ဒရိုဂျင်၏လှုပ်ရှားမှုများစတင်မယ့်ခလုတ်အဖြစ်ကပိုကထင်ပါတယ်။
အမိုင်နိုအက်ဆစ် catabolism Decrease
ပိုတက်စီယမ်၏အပါအဝင်အဖိုးတန်ဓာတုချိန်ခွင်၏ retention ကို, phosphorus ကိုများနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
အီစထိုဂျင် receptors ကန့်သတ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်တားစီး
အီစထိုဂျင် receptors တားစီးဖို့ fluoxymesterone များ၏စွမ်းရည်ကိုကအမျိုးသမီးရင်သားကင်ဆာကုသမှုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
PCT မူးယစ်ဆေးဝါးများ Anastrozole
Anastrozole အဆိုပါ aromatase အင်ဇိုင်း (ခရိုမိုဆုန်း P2) ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်လည်ပတ်သောသောအမျိုးအစား 450 Non-တီးရွိုက်ယှဉ်ပြိုင် aromatase inhibitor (ဒုတိယမျိုးဆက်) ဖြစ်ပါသည်, estrogen..It မှ testosterone ဟော်မုန်း၏ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသော့ချက်အင်ဇိုင်း testosterone ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန်နိုငျသညျ, အနိမ့်အီစထိုဂျင် (သို့သော်မရ အလွန်အကျွံ) နှင့်ကျန်းမာအဆစ်နှင့် lipid ထိန်းသိမ်းရန်။
Arimidex သည် PCT အစီအစဉ်ကိုသင်လုပ်ဆောင်သောစိတ်ကူးနှင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏သဘောသဘာဝအရ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအီစရိုဂျင်ပမာဏကိုများစွာလျော့ကျစေပြီး PCT ကာလအတွင်း ur ရည်မှန်းချက်မှာသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်စတင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပုံမှန်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သို့ပြန်ရောက်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ အက်စထရိုဂျင်ကိုရံဖန်ရံခါရန်သူအဖြစ်ရှုမြင်သော်လည်းအမှန်တကယ်အားဖြင့်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင် SERMs သည် PCT အစီအစဉ်အတွင်းသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Nolvadex နှင့် Clomid ကဲ့သို့သော SERMs များသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းအတွက်မူ၎င်းသည်ကျမ်းပိုဒ်၏အစပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးမျိုးထက်များစွာပိုမိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Arimadex သည် ၉၅ ကျော်ကျော်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်အစွမ်းထက်ကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ အထင်ကရပြင်းအားအတွင်းအီစရိုဂျင်၏% Letro အနီးရှိသော်လည်းအတော်လေးအားကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး။
6388 Views စာ
Fluoxymesterone / Halotestin ကုန်ကြမ်းအမှုန့်နိဒါန်း
Nandrolone decanoate ဆေးထိုး၏အသုံးပြုမှုကိုကဘာလဲ? အတှကျအသုံးပွု Oxandrolone အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
www.cofttek.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com www.scienceherb.com www.cmoapi.com ဖြစ်သည် www.apicdmo.com ဖြစ်သည် www.hashuni.com